Google ekpebiela ịnye ndị na - emepụta ya naanị ihe ọmụma ọgụgụ isi Akụkọ akụrụngwa
Google ekpebiela ịnye ndị na-emepụta ihe ọ bụla na-emepụta ihe ọmụma na-enweghị atụ
Juan Luis Arboledas | | Technology
O teela o were, ihe dịka afọ abụọ ma ọ bụ karịa, kemgbe ahụ Google kpebiri na ọ nweghị nke nhọrọ n'oge ahụ enwere ike ịzụta n'ahịa na-atọ ụtọ maka ụlọ ọrụ ahụ ịhọrọ ma bido soro ha rụọ ọrụ ọhụụ niile, n'oge ahụ, nke bụ ọgụgụ isi na ngwa igwe.
Ọ bụ kpọmkwem mgbe ahụ ka ndị injinia ama ama nke ụlọ ọrụ North America ama ama kpebiri ịkụ nzọ n'ụzọ nkịtị chepụta ma rụpụta akụrụngwa gị, nke emere baptism na aha TPU (Tensor Processing Unit). Obi abụọ adịghị ya, otu ngagharị nke ụlọ ọrụ ahụ dum kwuru n'oge ahụ ebe ọ bụ na n'ụzọ nkịtị, dị ka e mechara gosipụta, nyere Google nnukwu uru karịa ndị ọzọ na-asọmpi na mpaghara a n'ihi uru ndị ọrụ nhazi dị ka nke a nyere .
Ikekwe na n'oge a, ọ ghọtaghị nke ọma ihe TPU nwere ike iji hụ na Google nọ na-ebute ụzọ na mmepe ọ bụla metụtara ụwa nke ọgụgụ isi na mmụta igwe, dị ka nkọwa, na-agwa gị na, n'etiti oru ngo nke ihe nhazi a nyere ndu, abụghị ihe na-erughị AlphaGo, sọftụwia ahụ n'oge ahụ nwere ike imeri ọkpụkpọ Go kacha mma na mbara ala, ọ na-atọ ụtọ Assit ma ọ bụ ngwaọrụ dị iche iche dabere na ọgụgụ isi dị ka TensorFlow.
1 Google na-ewe nzọụkwụ ọzọ n'ime ụwa nke ọgụgụ isi na mmụta igwe na, maka nke ahụ, o kpebiri na TPU agaghịzi eji ya maka ọrụ ụlọ ọrụ.
2 Google ga-abụ ụlọ ọrụ izizi ga-enye ụlọ ọrụ ndị ọzọ ọrụ igwe na ọrụ ọgụgụ isi
Google na-ewe nzọụkwụ ọzọ n'ime ụwa nke ọgụgụ isi na mmụta igwe na, maka nke ahụ, o kpebiri na TPU agaghịzi eji ya maka ọrụ ụlọ ọrụ.
N'oge a, Google ekpebiela na oge eruola ị ga-aga otu nzọ ụkwụ na nke a ha emeela mkpebi dị mkpa hapụ ihe nke TPU gị nke mere na ọ na-aga site na-nanị iji Google oru ngo na ụlọ ọrụ ọ bụla nwere mmasị nwere ike ịmalite iji ya.
Echiche nke ọtụtụ mba ndị ọzọ bụ ihe ọzọ karịa ịnye usoro nhazi ya nke ukwuu ka ụlọ ọrụ dị iche iche nwee ike irigbu ya na mpaghara ndị ọzọ nke ahịa ahụ. N'aka nke ọzọ na ekele maka ngagharị a, Google ga-ahụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ metụtara oke okwu metụtara mmụta igwe na ọgụgụ isi adịghị etinye ego ha na mmepe nke ndị ọrụ ha ma bido jiri nke Google nyere site na igwe ojii yaYabụ, Google ga-eme ka ije n'ihu TPU ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
Ugbu a, dịka a mara ọkwa ya, ọ bụ eziokwu na ụlọ ọrụ ọ bụla nwere mmasị nwere ike nkwekọrịta TPU dabeere Mgbakọ ike Agbanyeghị, ikekwe nke a bụ akụkụ adịghị mma, maka ugbu a ọrụ a ga-adị naanị maka ndị ahịa azụmaahịa ga-eji ya. Ihe ọzọ dị egwu, anyị amaghị nke ọma ihe kpatara eji zoo ya, anyị hụrụ ya na Google achọghị igosipụta ọnụahịa nke iji TPU ya.
Google ga-abụ ụlọ ọrụ izizi ga-enye ụlọ ọrụ ndị ọzọ ọrụ igwe na ọrụ ọgụgụ isi
Onwe m, ekwesịrị m ikwupụta na ngagharị Google ejidewo m na mberede, ọkachasị ma ọ bụrụ na anyị echee na nnukwu ụlọ ọrụ ndị ọzọ, dị ka Amazon, Microsoft ma ọ bụ Apple, egosighi ihe ịrịba ama nke mmegharị ahụ. N'ụzọ dị otu a, Google jisiri ike bụrụ nke naanị ya ụlọ ọrụ izizi mepere usoro ọgụgụ isi ya na ụwa na-enye ọrụ dị njikere iji nhazi ihe mgbagwoju anya ma ọ bụ mgbe ọ gwụchara ọnụ.
Banyere ndị ahịa nwere ike ikwenye na ha nwere mmasị iji ọrụ ndị a, na-eme ka ihe atụ Lyft, nke gosipụtara ụgbọ ala ndị kwụ ọtọ. N'aka nke ọzọ, ekwenyela na nzọụkwụ ọzọ ha chọrọ ime na Google bụ belata dị ka o kwere mee ịdabere na ndị nrụpụta ndị ọzọ dị ka Nvidia, taa na-ahụ maka ịbịnye mkpụrụ igwe eji nyiwe a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Technology » Google ekpebiela ịnye ndị na-emepụta ihe ọ bụla na-emepụta ihe ọmụma na-enweghị atụ
Rollingchịkwa ngwa ụlọ Samsung na olu gị ga-ekwe omume n'oge na-adịghị anya
Facebook ga - ewepụta ndị ọkà okwu nwere ọgụgụ isi abụọ na July 2018